5 Dabeecadaha Inta Badan Aan La Ilaawi Karo Yurub | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Switzerland > 5 Dabeecadaha Inta Badan Aan La Ilaawi Karo Yurub
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo
(Last Updated On: 01/05/2021)
Buuraha dhaadheer ee neefta leh, dooxooyinka ubaxaya, biyo-dhacyo, harooyinka, iyo duurjoogta kaladuwan, Hoyga Yurub ee kaydka dabeecadaha adduunka ugu lama-ilawsiga ah. Kharash bixinta guud ahaan dalal cagaaran oo aad ubaxaa xilliga guga, 5 kaydka dabiiciga ee ugu quruxda badan Yurub waa jardiinooyin qaran oo la ilaaliyo oo soo dhoweeya socdaalka adduunka oo idil. Haddii aad xiisaynayso socodka, socod, ama ku raaxeysiga xurmada dabiiciga ah, markaa waad jeclaan doontaa kuweenna 5 keydka ugu sareysa ee Yurub lama ilaabaan.
gaadiidka Tareenka waa habka ugu bay'adda u fiican in safarka. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
1. Keydka Dabiiciga ee Belluno Dolomite ee Talyaaniga
Keydka dabiiciga ee Belluno waxaa lagu aasaasay 1990 si loo ilaaliyo dabeecada quruxda badan ee Dolomites. Waxay ku taal duleedka Dolomite ee waqooyiga Italy, Beerta dabeecadda Belluno waa mid soo jiidasho leh xilliga gu'ga. The buuro cagaaran iyo buur qurux badan dusha sare waxaa lagu daboolay roogag ubax ah. Iyadoo aan loo eegin heerka jirdhiskaaga, waxaad heli doontaa waqti fiican sahaminta keydkan dabiiciga ah, mar haddii ay jiraan wadooyin kala duwan. Keydka dabiiciga ee Belluno ee Yurub wuxuu kufiican yahay bilowga iyo khabiiro khibrad leh.
32000 hektar dhir dhif ah iyo nuuradda sare, keydka dabiiciga ah ee Belluno wuxuu ka socdaa dooxada Cismon ilaa dooxada Piave. Kala duwanaanta hodanka ah waxay ku jirtaa fauna iyo dhaqan labadaba taas oo ay uga mahadcelinayaan tuulooyin badan oo ku yaal aagga dooxada Piave. Markaa markaad booqato keydka dabiiciga Belluno ee Yurub, waxaad fursad u heleysaa inaad yeelato safar sahamin oo weyn oo ah yaabab dabiici ah iyo dhagaxyo dhaqameed.
Sida Loo Helo Belluno Dabiiciga Dabiiciga?
Keydka dabiiciga ee Belluno wuu kayaryahay 3 safarada tareenka saacadaha ka yimaada Venice.
Xagee Ku Joogi Karaa Agagaarka Belluno Park?
Waxaa jira buushash buur badan, B&B, iyo hudheelada.
Imisa maalmood ayaan ku qaataa Belluno Nature Reserve?
Belluno Dolomites reserve waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn iyo 5 keydadka dabiiciga ah ee aan la ilaawi karin inta badan Yurub. Sidoo kale, Belluno waa jardiin dabiici ah oo qurux badan, marka waa inaad ugu yaraan qarash gareeysaa 3 maalmo sahaminta iyo ku raaxeysiga harooyinka, buuraha, iyo quruxda dabiiciga ah.
Qiimaha Tareenka ee Florence
Florence ilaa Qiimaha Tareenka Venice
Qiimaha Qiimaha Tareenka ee Milan ilaa Florence
Qiimaha Venice ilaa Milan
2. Hohe Tauern Dabiiciga Dabeecadda ee Awstaria
Keydka dabiiciga ee ugu weyn Alps-ka Yurub wuxuu ku yaal Austria. Hohe Tauern reserve ayaa hoy u ah 10,000 noocyada xoolaha, 1,800 dhirta, iyo Grossglockner, Meesha ugu sareysa Austria, at 4,798 mitir heerka badda. Tartankan sare wuxuu ku dhexjiraa 200 kale sare, fauna cagaaran, harooyinka buur, iyo biyo-mareennada.
Dooxooyinka Hohe Tauern reserve reserve waxay ka buuxaan baraf qurux badan, tuulo qadiim ah iyo muuqaal dabiici ah views, roogag ubax ah, iyo kaymo. Beertan dabiiciga ah ee yurub waxay hoy u tahay booqdayaasheeda iyo dadka nasiibka u leh ee ku nool gobollada ku xeeran. Khaas ahaan, Dabeecadda Dabeecadda Umbalfalle ee biyo-dhaca iyo webiyada, halkaasoo aad ku arki doontid qaar ka mid ah biyo-dhacyada ugu layaabka badan in Europe.
Sida Loo Helo Hohe Tauern Nature Reserve?
Hohe Tauern reserve nature waxay aad ugu dhowdahay magaalada Mallnitz. Vienna ilaa Hohe Tauern tareen ayaa ku saabsan 5 saacadood.
Xagee joogi karaa agagaarka Hohe Tauern Park?
Mallnitz waa magaalo caan ah oo ku taal Hohe Tauern oo leh fursado hoy badan.
Imisa Maalmood Ayaan Ku Bixin Doonaa Hohe Tauern?
Waxaa jira dad badan oo kala duwan waddooyinka socodka ee Hohe Tauern keydka dabiiciga, markaa qorshaynta a 4-5 safarka maalmaha ayaa ugu fiican. Sidan ayaad ku baari kartaa jardiinada iyo magaalooyinka u dhow.
Qiimaha Tareenka ee Munich ilaa Salzburg
Qiimaha Tareenka ee Vienna ilaa Salzburg
Qiimaha Tareenka ee Graz ilaa Salzburg
Qiimaha Linz ilaa Salzburg
3. Keydka Dabiiciga ee Ecrins ee Faransiiska
Markaad dhex mushaaxdo kaydka dabiiciga ee cajiibka ah ee buuraha Alps ee Faransiiska, hubso inaad iska ilaaliso gorgorrada, stoats, willow grouse, iyo xayawaanno kale oo badan oo duurjoog ah taasi waxay ugu yeeraa guriga. Kaydkan cajiibka ah ee Alps-ka Yurub waa mid ka mid ah kuwa quruxda badan jardiinooyinka qaranka waxaad fursad u heli doontaa inaad ogaato.
Barafleyda, buuro dhaadheer, dhulalka alpine cagaaran, iyo hawo nadiif ah, Ecrins ’muuqaalkeeda iyo muuqaalkeedu wuxuu qabsan doonaa naftaada.
Sida loo Gaadho Ecrins Reserve Reserve?
Waxaad ka gaari kartaa jardiinada qaran ee Ecrins meel kasta oo ka mid ah Faransiiska. Kaydka dabeecadda wuxuu ku yaal meel u dhow xadka Faransiiska uu la wadaago Talyaaniga. Waxay u dhowdahay Lyon, Marseilles, iyo Geneva oo Switzerland ah, markaa safarka tareenka ee guud ahaan Faransiiska ilaa Ecrins waa ikhtiyaar weyn.
Xagee ku Joogi Karaa agagaarka Park Ecrins?
Laga soo bilaabo hudheellada qoysaska u roon ilaa kirada fasaxa, waxaa jira kala duwanaansho fursado hoy ah oo ku wareegsan keydka dabiiciga ee Ecrins.
Imisa maalmood ayaan ku qaataa Ecrins?
Adiga ayey kugu xiran tahay. Haddii aad go’aansato inaad wax u hurto 7 maalmood ama fasax usbuuc dhammaad ah, waxaad yeelan doontaa safar gabi ahaanba riyooday.
Qiimaha Marseilles ilaa Lyon Tareenka
Qiimaha Qiimaha Tareenka ee Paris
Qiimaha Lyon ilaa Paris Qiimaha
Lyon ilaa Qiimaha Tareenka ee Avignon
4. Saxon Germany Iyo Bohemian Switzerland Dabeecadda Dabiiciga ee Czech Republic
Keydka dabiiciga ee cajiibka ah ee Saxon Switzerland wuxuu ka bilaabmayaa Jarmalka ilaa Czech Republic. Buuraha dhagaxa nuuradda ah ee Elbe iyo samayska dhagaxa Pravcicka Brana ee dunida caan ka ah ayaa durba soo muuqday "Libaaxa, Saaxirad, iyo Wardrobe ”filimka. Keydkan dabiiciga ah ee neefta leh waa mid ka mid ah keydadka dabiiciga ee aan la ilaawi karin Yurub iyadoo leh aragtiyo badan oo saaxiibtinimo leh oo Instagram-ka ku yaal dusha sare ee canyon..
Xagaaga ama jiilaalka, waddooyinka cagaaran, jidadka waxaa lagu calaamadeeyay si wanaagsan oo sahlan in lagu kala garto doogga cagaaran ee ku teedsan labada dhinac ee wabiga iyo webiga. Saxon Jarmalka, ama Bohemian Switzerland, waxay kuxirantahay safarkaaga asalka ah ama meeshaad kusocoto, taas oo ah cirfiid wanaagsan iyo janno lagu tamashleeyo dadka safarka ah ee adduunka ka socda.
Sida Loo Gaadho Saxon Germany Ama Boohemian Switzerland Dabeecadaha Dabiiciga?
Waxaad ka heli kartaa keydkan dabiiciga ah ee cajiibka ah Yurub safar maalinle ah ka yimaada Prague ama Dresden.
Xagee Ku Degi Karaa Beerta Qaranka?
Maaddaama keydka dabiiciga uu ku yaal xadka labada dal ee Jarmalka iyo Czech Republic, xulashooyinka hoyga ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn.
Immisa maalmood ayaan ku qaataa Bohemian Switzerland?
Safar maalinle ah waa waajib buuxa, iyo haddii aad qaadan karto dhowr maalmood, ka dib aad ayaa loogu talinayaa.
Nuremberg ilaa Qiimaha Tareenka Prague
Qiimaha Tareenka ee Munich ilaa Prague
Qiimaha Tareenka ee Berlin ilaa Prague
Qiimaha Tareenka ee Vienna ilaa Prague
5. Keydka Dabiiciga ee Ordesa Iyo Monte Perdido ee Faransiiska
Waxay ku taalaa midigta dhexe ee udhaxeysa Spain iyo France, Ordesa iyo Mount Perdido waa qaar ka mid ah keydadka dabiiciga ee ugu yaabka badan Yurub. Inkasta oo uu ku yaal dhinaca Faransiiska oo leh shir madaxeed 3,355 m. magaca Monte Perdido inta u dhaxeysa buurta ayaa magaceeda la helay maxaa yeelay kama aysan muuqan dhanka faransiiska ee xadka.
Ordesa 'Sactacular Ordesa' labadaba waa a Goobta Hidaha Adduunka ee UNESCO ee Yurub iyo keyd biosphere ah duurjoogta iyo xayawaanka. Waxay ku taal dooxada Ordesa, biyo-dhacyo, duurjoogta kala duwan, gorgorka dahabka ah, iyo 32 noocyada naasleyda. Markaad fuulaysid oo aad u bogaadinaysid aragtida buuraha Pyrenees, hubi inaad fiiriso Marmot, Hawraar, iyo guumays, sidoo. Sidaa darteed, Keydka dabiiciga ee Ordesa iyo Monte Perdido waa goob muqaddas ah oo caan ku ah Yurubna waxay u tahay nooc kasta oo safar ah.
From 3 saacadood 'ilaa 2 safar safar maalmo ah, Ordesa waxay bixisaa wadooyin kala duwan oo socodka ah, heerarka kala duwan ee jirdhiska.
Sida Loo Gaadho Keydka Dabiiciga ee Ordesa?
Keydka Ordesa iyo Monte Perdido waxaa laga heli karaa Faransiiska iyo Spain labadaba. Laga soo bilaabo Zaragosa ilaa Torla-Ordesa waxay ku saabsan tahay 5 saacadood ama 3 saacado ka yimid Barcelona. Haddii aad u safreyso Faransiiska, markaa Toulouse waa 7 saacado hadhay.
Xagee Ku Heli Karaa Agagaarka Beerta Ordesa?
Waxaad Torla ka heli kartaa xulashooyin hoyga oo aad u wanaagsan, guryaha martida iyo hoteelada.
Imisa Maalmood Ayaan Ku Bixin Doona Keydka Dabiiciga ee Ordesa?
Ordesa iyo Mount Perdido sidoo kale waxaa loo yaqaan jardiinada Yosemite ee Yurub. Sidaa darteed, waa inaad joogtaa ugu yaraan 3 maalmood, oo ay ku jiraan socodka iyo nasashada.
5 kaydka dabeecadaha ee aan la ilaawi karin ee yurub waxay bixiyaan aragtiyo layaableh iyo wadiiqooyin tamashle oo lagu gaadho biyo-dhacayaasha adduunka ee cajiibka ah. Sidaa darteed, socodka dheer ee dooxooyinka cagaaran, bogaadinaysa beeraha ubaxa iyo buuraha dhaadheer ayaa ah hadiyadda ugu weyn ee aad naftaada siin karto. Ma jiraan wax ka nasasho iyo dhiirigelin badan dabeecadda duurjoogta ah ee waddamada Yurub ugu cajaa’ibka badan.
Paris si Qiimaha Tareenka Rouen
Rouen ilaa Brest Qiimaha Tareenka
Qiimayaasha Rouen ilaa Le Havre
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno inaad qorsheyso fasaxaaga kaydka dabiiciga ee aad dooratay tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "5 Meelaha ugu Badan ee Lama Ilaawi Karo Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-nature-reserves-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa luqadaha / ja si / fr ama / de iyo in ka badan.
Kaydinta Austrianature dolomitesiltaly ilaalinta dabiiciga naturereservegermany naturereserveitaly nooca reserveureurope travelgermany
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
10 Goobaha Quusitaanka Ugu Fiican Dunida
10 Goobo Kiro Ah Oo Fasax Ah Oo Ku Yaal Yurub
8 Fikradaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican
10 Safarada Lamaanayaasha La Raadinayo
top 10 Meelaha Qarsoon ee Dunida